Oke oyibo bụ anụ na-edozi ahụ dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ (site na 90%) dị na ahụ mmadụ. Site anụ anụ bekee, ị nwere ike esi nri dịgasị iche iche n'ọtụtụ ụzọ, mana ọ kachasị mma iji kpochapụ oke bekee.
Gwa gị otu ị ga esi esi nri nke oke oke bekee.
Ọchịchị n'ozuzu: mgbe ịzụrụ oke bekee ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ ozu ụmụ anụmanụ (ruo ọnwa 7) na anụ ọkụ ọkụ.
Stew nke oke bekee na nduku - uzommeputa
oke bekee - 1 anuoriri-erikpu ihe dika 1 n'arọ;
poteto - banyere 8 pcs.;
ngwa nri ndị na-adịghị mma (laurel, peppercorns fragrant, cloves, mkpụrụ coriander;
pasili elu, coriander;
mmanụ ihe oriri (dịka ọmụmaatụ, mmanụ oliv) maka nchịkọta.
Anyị na-ebipụ anụ ahụ nke oke bekee site na nkwonkwo ma tinye ya na mmiri oyi maka otu awa maka 3, mgbe ahụ, anyị na-asacha ma na-etinye ya na mmiri lemon maka ihe dị ka nkeji 20, ma jiri nlezianya sachaa. A na-ebipụ eyịm peeled n'ime nkeji iri anọ, na carrots bụ obere ebupụta. Na saucepan anyị ga-ekpocha mmanụ. Naanị zọpụta ya ruo mgbe hue gbanwere, wee tinye carrots, anụ, na ngwa nri na mix. Ghichapu site na ikpuchi mkpuchi maka ihe dị ka nkeji iri 40, mgbe ụfọdụ, mee ka ọ bụrụ mmiri, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Tinye nnukwu poteto sliced ​​na saucepan (obere nwere ike ịbụ kpamkpam). Sichaa ruo mgbe nduku dị njikere. Mgbe stew dịtụ jụụ, gbakwunye garlic na herbs (shredded).
Na-eso otu uzommeputa, anyị na-akwadebe a oke bekee stew na nduku na utoojoo ude. A na-agbakwunye ude mmiri uto, mgbe stew fọrọ nke nta ka ọ dị njikere, anaghị ekpughe ngwaahịa a na ọgwụgwọ okpomọkụ.
Nzuzo Stew na akwukwo nri
oke bekee - 1 pc. na-eru ihe dịka 1 n'arọ;
ugu - ihe dị ka 300 g;
broccoli ma ọ bụ kọlịflawa - banyere 300 g;
Bulgarian ose ụtọ - 2 pcs.
ngwa nri ndị na-adịghị mma (laurel, ose dị ụtọ, cloves, osisi junipa);
ala nri (grated nutmeg, coriander, saffron, ose ọkụ);
mmanya ma ọ bụ ọcha (vermouth, nutmeg ma ọ bụ cognac, tequila) - 60-100 ml;
elu (coriander, rosemary, pasili).
Anyị na-eme ka ndị rabaị belata n'ime mmiri na mgbakwunye na obere mmanya mmanya mmanya maka awa atọ.
N'okpuru ebe a, jiri nwayọọ nwayọọ na-esi na mmanụ oliv ma gbakwunye anụ ahụ. Ntugharị na stew, na mgbakwunye nke ngwa nri nke mmiri na mmanya maka ihe dị ka nkeji 40 mgbe ụfọdụ edemede (nkeji iri abụọ na-enweghị mkpuchi ikpochapụ mmanya). Gbakwunye ugu, belata ya na obosara obosara, broccoli, gbasasiri n'ime obere ogbe na akwukwo di uto Ọ dị jụụ. Gaa na herbs na garlic tupu ị na-eje ozi.
Nri ihe ọṅụṅụ na tomato - Ntụziaka
Chicken na eggplant
Achịcha na ọkụkọ - ihe nchịkọta kachasị ụtọ nke ụlọ na-adịghị edozi ahụ
Poteto na anụ ezi na oven
Akuku nduku na mushrooms
Ọka porridge na mmiri ara ehi
Dumplings na Onye ahịa
"Eggplant na akwa na pickled eyịm" salad
Meatballs ke tomato ihendori - uzommeputa
Nri nri n'ime akwukwo nri - nri di nma maka nri okpokoro
Fillet nke duck - ntụziaka nri
Arthritis Psoriatic - Mgbaàmà
Nri oriri na ụmụaka
Na-eri nri na gout n'oge a na-agba ọsọ
Ebe ihi ụda akuku
Ọkpụkpụ arthrosis nke nkwonkwo hip
Nicotinic acid maka ọnwụ
Nri maka shawarma
Ngwaahịa site na Pavlov Posad shawls
Ngwọrọgwu ndi mmadu maka uzo n'ulo
Ngwa na skewers
Kedu ihe ị ga-eyi jeans?
Ebube Banyere Ebube 2018 - ihe edozi isi na bangs na-ewu ewu na 2018?
Egwú maka egwu egwu
Olee otú iji merie ụjọ?
Mitenki - ihe dị, nke ị ga-eyi, ịmepụta ụta nkecha?
Mmiri nke nkume awara
Kedu nke ka mma: laminate ma ọ bụ linoleum?
Uwe mgbanaka ụmụ nwanyị
White Head - Njirimara ọgwụ na contraindications
9 Uzo A Ga - esi Nwee Ucha Oro